खोकी सिरप र रक्सी: यदि तपाईं खोकी सिरप लिइरहनुभएको छ भने के तपाईं पिउन सक्नुहुन्छ? - स्वास्थ्य शिक्षा | सेप्टेम्बर 2021
कल्याण कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा औषधि बनाम मित्र समुदाय समाचार, कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा घरपालुवा जनावर समुदाय, कम्पनी कम्पनी, समाचार स्वास्थ्य कम्पनी, औषधि जानकारी स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर कम्पनी समुदाय, कल्याण
मुख्य >> स्वास्थ्य शिक्षा >> के तपाईं कफ सिरप लिइरहनुभएको छ भने के तपाईं रक्सी पिउन सक्नुहुन्छ?
एउटा खोकीले तपाईंलाई जोगाउँदै गम्भीर दु: खबाट सताउन सक्छ रात को सबै घण्टा । जब तपाइँसँग पेस्कीको चिसो छ खोकी , तपाई ओभर-द-काउन्टर (ओटीसी) खोकी सिरपको बोतलमा पुग्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईंले आफ्नो डाक्टरलाई आफ्नो रोगको लागि देख्नु भएको छ भने, ऊ वा उनीले कडा खोकीको तयारीसमेत लेख्न सक्छन्।
त्यसो भए के हुन्छ यदि तपाईं फुटबल खेलको दौडान डिनर वा बियरको साथ एक गिलास वाइनको मजा लिन चाहनुहुन्छ? के तपाइँ खोकी सिरप र रक्सी मिश्रण गर्न सक्नुहुन्छ?
दुर्भाग्यवस, रक्सी र खोकी सिरपको मिश्रण हुँदैन। खोकी सिरप र रक्सीको मिश्रणले चक्कर बढावा र निन्द्रा बढ्न सक्छ र तपाईंको समन्वय र ड्राइभि। बिगार्न सक्छ। केही खोक्रा औषधीहरूले पनि रक्सी समावेश गर्दछ, त्यसैले प्रभावहरू अझ गम्भीर हुन सक्छ। साधारण खोकी सिरप र मदिरा बीचको अन्तर्क्रियाको बारेमा अधिक जान्नको लागि पढ्न जारी राख्नुहोस्।
साधारण खोकी सिरपहरू र तिनीहरूका सामग्रीहरू
पहिले, केहि सबैभन्दा सामान्य अति-काउन्टर (ओटीसी) र प्रिस्क्रिप्शन बिच्छेद गरौं खोकी औषधि र उनीहरूका अवयवहरू जसले खोकीलाई कम गर्दछन्।
Robitussin डीएम , Tussin DM (ग्वाइफेनिसिन, एक्फेक्क्टोरन्ट र डेक्स्ट्रोमर्थोर्फन, खोकी दबाउने वस्तु समावेश गर्दछ)
Delsym (dextromethorphan समावेश गर्दछ)
NyQuil सिरप (धेरै अन्य सामग्रीहरूको साथमा डेक्स्ट्रोमर्थोर्फन समावेश गर्दछ)
DayQuil सिरप (धेरै अन्य सामग्रीहरूको साथमा डेक्स्ट्रोमर्थोर्फन समावेश गर्दछ)
Mucinex-DM तरल (guaifenesin र dextromethorphan समावेश)
नोट: अन्य धेरै खोकी र चिसो तयारीहरू (गोली वा सिरपको रूपमा) पनि डेक्सट्रोमर्थोर्फन समावेश गर्दछ NyQuil Liquicaps, DayQuil Liquicaps, रोबिटसिन खोकी जेल, र Mucinex-DM ट्याब्लेटहरू ।
Phenergan डीएम (promethazine र dextromethorphan समावेश)
कोडिनको साथ Phenergan (promethazine र codeine समावेश गर्दछ)
Robitussin AC (guaifenesin र कोडिन समावेश गर्दछ)
Tussionex (क्लोरफेनिरामाइन र हाइड्रोकोडोन समावेश गर्दछ)
तपाईंले माथि देख्न सक्नुहुन्छ, खोकीको लागि सबै भन्दा सामान्य सामग्रीहरू हुन् dextromethorphan र Codeine ।
के तपाईं डेक्सट्रोमर्थोर्फन र रक्सी मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ?
के हुन्छ यदि तपाईं ओटीसी वा प्रिस्क्रिप्शन खाँसी औषधि लिईरहनुभएको छ जुन खोकीलाई दबाउने डेक्सट्रोमर्थोर्फन — के तपाईं त्यो रोबिटसिन-डीएम र रक्सीलाई मिसाउन सक्नुहुन्छ? वा Delsym र रक्सी? वा कुनै अन्य उत्पादन जुन मदिराको साथ डेक्सट्रोमर्थोर्फन हो?
होईन । यद्यपि तपाइँ सजिलैसँग डेक्सट्रोमर्थोर्फन ओटीसी युक्त उत्पादनहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ, यी औषधीहरू रक्सीसँग मिसाउँदा धेरै खतरनाक हुन सक्छ।
त्यो किन हो? ठीक छ, डेक्सट्रोमर्थोर्फन र रक्सी दुबै केन्द्रीय स्नायु प्रणाली (सीएनएस) डिप्रेसनन्टहरू हुन्, जसको मतलब तिनीहरू आराम, निन्द्रा र एक उत्साहपूर्ण भावनाको कारण हो। डेक्सट्रोमर्थोर्फन, आफ्नै तर्फ, एक व्यापक दुरुपयोग औषधि हो। र डेक्सट्रोमर्थोर्फन र मदिरालाई मिक्स गर्नाले थप साइड इफेक्ट हुन्छ, जसले ओभरडोजको जोखिम बढाउन सक्छ। यस संयोजनले निम्त्याउन सक्ने केही प्रभावहरू:
कसरी कालो toenail कवक को छुटकारा पाउन
श्वासप्रसाद डिप्रेसन (सास फेर्न ढिलो)
शरीरको बाहिरको अनुभूति
ब्रेन घावहरू जसले मेमोरी र व्यवहार समस्या निम्त्याउन सक्छ
Guaifenesin के हुन्छ?
ग्वाइफेसिन एक्सपेक्टोरन्ट हो, जसले बलगमलाई सुस्त पार्न मद्दत गर्दछ। धेरै व्यक्तिहरूले यो औषधीको प्रयोग सस्तो खोकला बिग्रनको लागि गर्दछन्। ग्वाइफेनिस ओटीसी उत्पादनहरूमा भेटिन्छ जस्तै म्यूसिनेक्स वा प्लेन रोबिटुसिन (म्यूसिनेक्स-डीएम वा रोबिटसिन-डीएम होइन - डीएम यी उत्पादनहरूमा डेक्स्ट्रोमर्थोर्फेन हो)। केहि नुस्खा उत्पादनहरू, जस्तै कोडिनको साथ रोबिटसिनले पनि ग्वाइफेनिसिन समावेश गर्दछ।
यद्यपि गुएफेनिसिनले प्राविधिक रूपमा मदिरासँग अन्तर्क्रिया गर्दैन, बिरामी हुँदा मदिरा छोड्नु अझ राम्रो हुन्छ। रक्सीले बिरामीका लक्षणहरू निम्त्याउन सक्छ (र तपाइँको औषधिहरूको साइड इफेक्ट) खराब गर्न। रक्सीले तपाईंलाई डिहाइड्रेटेड र तपाईंको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई कमजोर बनाउन सक्छ।
तपाईं कोडिन खोकी सिरप र रक्सी मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ?
मानिलिनुहोस् तपाईंको खोकी एकदम गम्भीर छ कि तपाईंले ओटीसी ऐस छोड्नुभयो र सिधै तपाईंको डाक्टरको छेउमा जानु भयो, जसले खोकी सिरप बनायो जसमा हाइड्रोकोडोन वा कोडिन हुन्छ। तपाईं एक हाइड्रोकोडोन वा कोडिन खोकी सिरप र रक्सी मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ?
मादक औषधीहरू जस्तै हाइड्रोकोडोन वा कोडिन समावेश गर्दछaकालो बक्स चेतावनी , जो संयुक्त राज्य खाद्य र औषधि प्रशासन (एफडीए) द्वारा आवश्यक कडा चेतावनी हो। यी औषधिहरूको लागि उच्च क्षमता छ दुरुपयोग र निर्भरता जब उनीहरू आफैं लिन्छन्, अधिक मात्रा र मृत्युमा अग्रसर हुन्छन्। काफ सिरप जसमा मादक पदार्थ हुन् नियन्त्रित पदार्थ र छनौटपूर्वक सावधानीपूर्वक स्क्रीनिंग गरिएको वयस्कहरूको लागि तोकिनु पर्छ जहाँ लाभहरू जोखिमहरू भन्दा बढी हुन्छन्। जब उनीहरू आफैं लिइन्छन्, यी कोडिन युक्त खांसी सिरपहरूले गम्भीर, जीवन-धम्की दिने वा घातक श्वासप्रशोषण निम्त्याउन सक्छ।
अब, रक्सीमा थप्नुहुन्छ? त्यो ठूलो हो। यी खोकी सिरपका निर्माताहरूले चेतावनी दिन्छ (ब्ल्याकबक्स चेतावनीमा पनि) कि कोडीन वा हाइड्रोकोडोन जस्ता ओपोइड्सलाई मदिरासँग मिसाउँदा यसले गहिरो बेहोरा, श्वासप्रश्वासको उदासी, कोमा र मृत्युलाई निम्त्याउन सक्छ। हाइड्रोकोडोन- वा कोडिन युक्त कफ सिरप प्लस मदिरा प्रकोपको लागि एक पर्चे बराबर हुन्छ।
साथै, केहि ओटीसी र औषधी खाँसी औषधिहरुमा उनीहरुका खोकी दबाउने तत्त्वका साथै थोरै रक्सी पनि हुन्छ। त्यसोभए अब तपाईं रक्सी र अधिक रक्सीको साथ औषधिको सबै प्रभावहरू संयोजन गर्दै हुनुहुन्छ।
कुन खोकी सिरपमा रक्सी हुन्छ?
यो चार्ट , न्यु योर्क राज्य को मेडिकल सोसाइटी द्वारा निर्मित, मादक र मदिरा समावेश छैन कि दवाइहरु को एक विस्तृत सूची छ।
केहि सामान्य खोकी सिरप जसमा रक्सी समावेश हुन्छन्, NyQuil, ZzzQuil, र अन्य रातको खांसी वा खोकी / चिसो सिरपका अन्य सूत्रहरू समावेश गर्दछ।
कुन खोकी सिरपमा रक्सी हुँदैन?
अझ राम्रो, मदिरामुक्त फर्म्युलेसन छनौट गर्नुहोस्। धेरै जसो फार्मेसीहरूले केही प्रकारको रक्सी-मुक्त कफ सिरपहरू बोक्दछन्, जस्तो कि रक्सी-मुक्त Tussin-DM वा Safe-Tussin DM । यदि तपाईं आफ्नो गिलास मा रक्सी जोगिन चाहानुहुन्छ र तपाईंको औषधि, यी विकल्पहरू मध्ये एउटा छनौट गर्नुहोस्।
यद्यपि, फर्मूलनहरू बर्षहरूमा परिवर्तन हुन सक्दछ, तपाईंको फार्मासिष्टसँग लेबल जाँच्न विवेकशील हुन्छ ओटीसी खोकीको औषधि छनौट गर्दा उत्पादमा कुनै मदिरा छैन।
यदि म रक्सी पिउँछु भने, मेरो खांसीको उपचार गर्न म के लिन सक्छु?
नराम्रो खबर: केही दिनको लागि रक्सी जोगिनु उत्तम हुन्छ जबसम्म तपाईं राम्रो महसुस गर्नुहुन्न। प्राय: खोकीको औषधि र रक्सीको अन्तर्क्रिया गर्ने क्षमता हुन्छ, र केहि अन्तर्क्रिया घातक हुन सक्छ।
शुभ समाचार: तपाईं छिटो निको हुन सक्नुहुन्छ यदि तपाईं बिरामी हुँदा पिउनुहुन्न। रक्सीले तपाईंको निद्रामा हस्तक्षेप गर्न सक्दछ, र जब तपाईं बिरामी हुनुहुन्छ, तपाईंलाई तपाईंको z को आवश्यक छ। अत्यधिक रक्सीले तपाईंको प्रतिरक्षा प्रणाली बिरूद्ध पनि काम गर्न सक्छ।
त्यसो भए, रक्सीबाट जोगिनुहोस् र तपाईंको खोकीको औषधि लिनुहोस्। वा, यदि तपाईंलाई थाँहा छ कि तपाईं रक्सी पिउनुहुन्छ भने, आफ्नो खांसीको उपचारको लागि केही औषधि रहित विधिहरू प्रयोग गरेर हेर्नुहोस्। एक चम्चा मह, केही गैर-औषधी कफ ड्रप,ahumidifier वा भापोरिजर, र पर्याप्त तरल पदार्थ मात्र गर्न सक्छ।
जब तपाईं एक बिरामीबाट निको हुनुहुन्छ र खोकी सिरप लिदै हुनुहुन्छ भने, रक्सी त्याग्नुहोस्। तपाईंसँग राम्रो समय भएकोमा उत्सव मनाउन पर्याप्त समय हुन्छ।
Vagisil vs. Monistat: मतभेद, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ
कसरी राती घाँटी दुख्ने निको पार्ने
के खाँसी को औषधि ब्रोंकाइटिस को लागी राम्रो छ
Celebrex र celecoxib बीच के फरक छ?
गर्भावस्था को समयमा खमीर संक्रमण को लागी घरेलु उपचार
कसरी motrin र tylenol सँगै लिने
कहिले सम्म यो valtrex को लागी काम गर्न को लागी लाग्छ
कति लामो टायलेनोल ३ को लागी राम्रो छ